Huawei ichaisa 200 mamirioni euros mukuvakwa kwefekitori muFrance | Linux Vakapindwa muropa
Pamusangano wevatori venhau, Huawei akazivisa kuti ine hurongwa hwekuita mari yemamiriyoni mazana maviri emaeuro zvekuvaka fekitori iyo ichave yakatsaurirwa kuburitsa 4G uye 5G netiweki michina muFrance.
Kamwe kwapera, Ichave fekitori yakakura kwazvo yeHuawei kunze kweChina. Muchokwadi, kunze kweChina, Huawei anosvika parizvino chete chirimwa chekugadzira muIndia uko mafoni akagadzirwa. Mune mamwe mativi epasi, aya ndiwo magungano.
Uye ndizvozvo kubva pakumanikidzwa kwese kwakaitwa neUnited States kubvisa Huawei kubva kunetiweki dze5G. France neBritain kusvika parizvino vakaramba kubvongodzwa. MuGerman, uko nyaya yakakamurwa mukati mehurumende yeGerman, Chancellor Angela Merkel akakumbira kumirira musangano weEuropean unotevera Kurume kuti atore danho rekuti ashandise kana kwete Huawei, sekureva kwakawanda.
Ndichiri kuBritain, hurumende yaBoris Johnson yakazivisa kuti ichabvumidza Huawei kutora chinzvimbo chakatemerwa pakuburitswa kwe5G.
Tekinoroji ye5G inotarisirwa kuunza kusvetuka kukuru mukumhanya uye kugona kwekutaurirana uye kuwedzera kwekuwedzera kwekubatana pakati pemabhirioni emidziyo, kubva kumafriji akangwara kusvika kumotokari dzinozvityaira.
Mutungamiri weHuawei, Liang Hua, pamusangano wevatori venhau Ini ndataura kuti zviitiko zveHuawei zvaive zvepasirese uye kuti boka iri raive nechikwereti icho kuzita rekuva nepasi rose remaindasitiri.
“Saiti iyi ichabatsira vese muEurope, kwete France chete. Saiti ino ichatanga kugadzira michina yeredhiyo yobva yachinjira kune zvimwe zvigadzirwa mune ramangwana, zvinoenderana nezvinodiwa mumusika weEuropean »
Izvo hazvina kutaura kuti iyo fekitori ichave iri kupi, iyo inoburitsa yakatenderedza XNUMX bhiriyoni euros yemidziyo pagore, kana riinhi kugadzirwa kuchatanga.
Liang akati kambani iri kuita hurukuro nehurumende yeFrance nevakuru vemunharaunda nezve chirongwa ichi.
"Nemuchina uyu, Huawei anoti unokwanisa kuvhara zvese zvinongedzo pamwe nekukosha kwayo uye kutyaira maindasitiri emuno kumberi, kumusoro nekudzika.
Izvi zvinongedzo zvinosanganisira R&D, kutengesa, kutenga, kugadzira, zvigadzirwa, sevhisi, uye kusimudzira tarenda. Iyo fekitori ichavewo imwe yeiyo yekutanga Huawei yekumisikidza kwayo epamberi ekugadzira matekinoroji muEurope. Izvi zvinowedzera kukwikwidza kwehunyanzvi muindastiri yeEurope uye kuwedzera kusimba kwemaketani emuno ekuvakisa nezvivakwa. '
Inofungidzirwa kuti chirongwa ichi chichaunza zvakananga mazana mashanu emabasa. Huawei yakashanda muEurope kwemakore makumi maviri, ichishandisa zvakananga vanopfuura vashandi zviuru gumi nezviviri.
Semagumo, Huawei yakagadzira uye zvisina kunangana mabasa angangoita 170,000 muEurope. Kuenderera mberi, Huawei akazvipira kushanda 'muEurope, kuEurope', achisara akavhurika uye achibatana, uye achiramba achipa kuEurope.
Hurumende yeFrance inofanirwa, kune yayo chikamu, ipe mvumo yayo yekutanga kupera kwemwedzi kune zvikumbiro zvemidziyo inogadzirwa nevashandisi vane sarudzo pakati peboka reChinese nevatengesi veEuropean Nokia neNokia.
Finalmente Huawei akati chirimwa chichavawo nenzvimbo yekuratidzira, "Kuratidzira isina waya base station yekugadzira, software kurodha uye kuyedza maitiro" uye kambani yakati "ichave yakavhurika kune vanoshanda, hurumende nevakuru vane hukama, zvichiratidza chimiro chakanaka chaHuawei pakudanwa kweEurope yehumambo digital".
Mutungamiri weEuropean weiyo Yemukati Musika, Thierry Breton, asingataure nezveHuawei, akadzokorora kakawanda nezve njodzi dzekuchengetedza yakasimudzwa nevamwe vagadziri vemidziyo.
United States inoti Huawei iri padyo nehurumende yeChinese uye kuti michina yayo ingashandiswa sechishandiso, chikumbiro chakarambwa nekambani iyi.
Sezvo Huawei anoenderera mberi achinetseka nekuwedzera kumanikidzwa kubva kuUS, chiziviso ichi chinoratidza nguva iyo kambani iri kuda kushandisa kugadzirisa zvinonetsa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Huawei achaisa mari mazana maviri emamiriyoni euros mukuvakwa kwefekitori muFrance